အစ္စကိုအားခေါ်ယူရန် လီဗာပူးနဲ့ယူနိုက်တက်အသင်းတို့ စောင့်ကြည့်လျက်ရှိ။ – SoShwe
Home/Sport/အစ္စကိုအားခေါ်ယူရန် လီဗာပူးနဲ့ယူနိုက်တက်အသင်းတို့ စောင့်ကြည့်လျက်ရှိ။
အစ္စကိုအားခေါ်ယူရန် လီဗာပူးနဲ့ယူနိုက်တက်အသင်းတို့ စောင့်ကြည့်လျက်ရှိ။
admin March 5, 2019	Sport Leaveacomment
ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းများဖြစ်ကြတဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့လီဗာပူးအသင်းတို့ဟာ ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်အသင်း၌ ပုံမှန်နေရာရရှိရန် ရုန်းကန်နေရသည့် ကွင်းလယ်ကစားသမား အစ္စကိုအား လာမည့် နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့၌ ခေါ်ယူရန် စောင့်ကြည့်နေကြကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ အစ္စကိုဟာ ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်အသင်းနဲ့ (၂၀၂၁-၂၂) ဘောလုံးရာသီကုန်ဆုံးသည်အထိ စာချုပ်သက်တမ်းကျန်ရှိနေသော်လည်း ယခုနှစ်ဘောလုံးရာသီ၌ ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်အတွက် ရုန်းကန်နေရခြင်းကြောင့် ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်အသင်းနဲ့ အနာဂတ်မရေမရာဖြစ်နေခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် (၂၆) နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သူ စပိန်လက်ရွေးစင်ကွင်းလယ်ကစားသမားဟာ အသင်းအတွက် လာလီဂါသွင်းဂိုးတစ်ဂိုးသာ သွင်းယူပေးထားနိုင်သည့်အပြင် (၂၀၁၈-၁၉) ဘောလုံးရာသီ အသင်းရဲ့ စပိန်လာလီဂါ ပွဲထွက်လူစာရင်း၌ (၅) ကြိမ်သာ ပါဝင်ခွင့်ရရှိထားပါတယ်။ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းက အစ္စကိုအား ခေါ်ယူရန် ကာလရှည် စောင့်ကြည့်ခဲ့သော်လည်း လက်ရှိအချိန်၌ ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ လီဗာပူးအသင်းတို့ကလည်း အစ္စကိုအားခေါ်ယူရန် စောင့်ကြည့်နေကြကြောင်း အီတလီသတင်းစာဖြစ်သည့် Tuttosport မှ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အစ္စကိုသည် (၂၀၁၃) ခုနှစ်၌ မာလာဂါအသင်းမှ ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိလာခဲ့သည့် ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်အသင်းနဲ့အတူ လာလီဂါအမှတ်ပေးချန်ပီယံ (၁) ကြိမ်၊ ကိုပါဒယ်ရေးဖလား (၁) ကြိမ် နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား (၄) ကြိမ်တို့ကို ဆွတ်ခူးရယူနိုင်ခဲ့သည့် ကစားသမားတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Previous ပေါ့ဘာနဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် နောင်တမရသည့် မော်ရင်ဟို။
Next ?????????????????????????? ??????????????????? ? ? ?